Sarkaal ka tirsan Gorgor oo lagu dilay Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Sarkaal ka tirsan Gorgor oo lagu dilay Muqdisho
Sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka kumaandooska Gorgor ayey xalay kooxo ku hubeysan Biskoolado ku dileen magaalada Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Kooxo hubeysan ayaa xalay gudaha degmada Wadajir ee gobolka Benaadir ku dilay sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka kumaandooska Gorgor ee Xoogga dalka Soomaaliya. Goobjoogayaal aan xiriir la sameynay ayaa waxay noo sheegeen in sarkaalka ay toogasho ku dileen rag ku hubeysnaa Biskoolado, xili uu kusii jeeday hoygiisa oo ku yaalla degmada Wadajir.
Sarkaalka oo lagu magacaabi jiray Maxamed Cali Yarami, oo ay kooxdani toogteen ayaa markii hore dhaawac soo gaaray, iyadoo ugu dambeyn dhaawiciisa loola cararay Isbitaalka kaddibna uu u geeriyooday.
Kooxdii hubeysneed ee falkan geysatay ayaa isaga baxsatay, waxaana gaaray durbadiiba goobta ay wax ka dhaceen ciidamo ka tirsan kuwa Booliska dowladda Soomaaliya, mana jirto cid loo soo qabtay falkan lagu dilay sarkaalka sare ee ka tirsan ciidanka Gorgor. Sidoo kalena ma jiraan wax war ah oo ay soo saareen laamaha amniga ee dowladda oo ku aaddan falkaasi.
Kooxda Al-Shabaab oo inta badan ku caan ah falalka nuucan oo kale ah ayaan weli wax war ah kasoo saarin dilka loo geystay sarkaalka ka tirsan ciidanka Gorgor.